Sawirada | RayHaber | raillynews
Gawaarida, oo ah tusaalaha kaliya ee gaarka ah ee tareenka cad ee ay isticmaali jireen Atatürk inta lagu guda jiro safarada wadankiisa (1935-1938), waxaa lagu soo bandhigay Ankara Garda ilaa iyo 1964, oo ku xigta Atatürk House iyo Matxafka Tareenka ee Dagaalkii Xornimada. Wasaaradda Dhaqanka [More ...]
KHUDBADAHA KOOWAAD ayaa dhaqaajiya saqafka korantada qoraxda ugu horreysa ee adduunka ee dusha sare ee warshadda daaweynta qashinka ee Chur, Switzerland. Mid ka mid ah warshadaha soosaara teknolojiyada adduunka ee horseed u ah xalalka farsamada iyo elektiroonigga ah [More ...]
Head of Ergada Midowga Yurub ee Turkey Berger, danjirayaasha Ankara oo ka mid ah dalalka Midowga Yurub iyo la-hawlgalayaasheeda ay, kuwaas oo helay Anatolia Eastern Express dalxiiska wado fantastic. hoos iskaashi la EU Midowga Yurub (EU) ururka waaxda gaadiidka Kamaalu abaabulay [More ...]
Ku guuleystaha Tartanka Carton Girl ee lagu qabtay baaxadda Uludağ ee Bandhigga Jiilaalka, oo ay soo qabanqaabisay markii afaraad ee sanadkan ee Dawladda Hoose ee Bursa, ayaa lagu abaalmariyey dahab. Abaalmarinta meelaha koowaad, labaad iyo saddexaad ee 2 koox ee kaladuwan, Metropolitan [More ...]
SAMULAŞ A.Ş., oo buuxisa baahiyaha gaadiidka ee Samsun, ayaa sidoo kale kor u qaadaysa wacyiga jiilalka mustaqbalka. Marka la eego baaxadda Mashruuca Waxbarashada, 13 oo arday ayaa tababar wax ku ool ah laga siiyay 600 iskuul. Mashruuca "Jiillada Mustaqbalka Waa Wacyigelinta" ee SAMULAŞ A.Ş. [More ...]
Rakaabka ANKARAY Safarrada Guriga Nadiifinta
Qeybta Guud ee Agaasinka Guud ee EGO wuxuu bilaabay inuu sameeyo nadiifin gudaha ah iyo mid gudaha ah oo ah 33 tareen oo loo isticmaalo ANKARAY oo lagu nadiifiyo kareemada dusha sare markii ugu horeysay. Qaadashada ilaa 110 kun oo rakaab ah maalintii iyo [More ...]